Raila Odinga oo sheegay haddii la doorto inuu xallin doono khilafaadka xuduudda Garissa iyo Isiolo | Star FM
Home Wararka Kenya Raila Odinga oo sheegay haddii la doorto inuu xallin doono khilafaadka xuduudda...
Madaxa xisbiga ODM Raila Odinga ayaa sheegay in hadii sanadka 2022-ka uu ku guulaysto madaxtinimada wadanka uu xal u heli doono khilaafaadka ku soo noqnoqday xuduudda deegaanka Lagdera ee Garissa iyo ismaamulka dariska la ah ee Isiolo.
Waxaa uu carrabka ku adkeeyay in ay lagama maarmaan tahay iyadoo ay caqabado sida abaarta jiraan in si nabad ah loo wada nolaado.
Mr. Odinga ayaa hoosta ka xarriiqay muhimadda ay leedahay in la sugo amniga xuduudda ismaamullada dariska ah gaar ahaan kuwa xoolo dhaqatada oo marka ay daaqa iyo biyuhu yaradaan isku soo gudbo taasoo mararka qaar sababtay isku dhac.
Ra’iisul wasaarihii hore ee dalka ayaa xusay in marnaba aan loo dulqaadan karin dagaal dhex maro bulshooyinka dariska ah iyo hanti la burburiyo.
Dhanka kale waxaa uu dhallinyarada u ballanqaaday in hadii uu hoggaanka wadanka qabto ay heli doonaan boqolkiiba 30 ee qandaraasyada dowladda dhexe iyo ismaamullada.
Previous articleRuushka oo laga diiwaangeliyay in ka badan 1,000 xaaladood oo ah dhimasho ka dhalatay COVID19
Haweeney da’a ah oo loo xiray ka ganacsiga daroogada xashiiska iyo khamriga Saraakiisha booliiska ee ismaamulka Makueni ayaa xabsiga u taxaabay haweeney 74 sano jir...